Waini 3.3 kusimudzira kuburitswa kunotanga nerutsigiro rweVulkan | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mazuva apfuura vhezheni itsva yewaini yaburitswa. Kune avo vachiri kusaziva ichi chishandiso chinoshamisa, regai ndikuudzei icho chiri nezve; Waini inoenderana inoenderana inokwanisa kumhanyisa Windows kunyorera pane Unix-senge masystem sezvakaita Linux, macOS, uye BSD.
waini inotarisira kududzira Windows API kufona kuenda kuPOSIX mafoni pane kubhururuka, kubvisa mashandiro uye ndangariro zvirango zveimwe nzira, iyo waini isiri emulator iri muyananisi, nekuti ndiyo iri pamusoro pekubatanidzwa kwakataurwa.
Mushure memavhiki akati wandei ebudiriro uye nemhedzisiro yakanaka vanhu vari shure kwekugadzirwa kwewaini vazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeiyi, kuuya kune hongu kune yayo nyowani vhezheni yewaini 3.3.
Iyo yekuvandudza vhezheni yeWine 3.3 inouya pamwe neakawanda akakosha ekuvandudza, pakati pavo isu ticharatidza mamwe akanakisa nhau ayo achaita kuti vazhinji vashandisi vafare.
1 Chii chitsva muWini 3.3
2 Maitiro ekuisa waini mu3.3 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
3 Maitiro ekuisa waini 3.0 paUbuntu uye zvigadzirwa?
4 Maitiro ekuisa waini 3.0 pane Fedora uye zvigadzirwa?
Chii chitsva muWini 3.3
Izvozvo zvakati, tinotanga nenhau izvo isu tichawana mune ino vhezheni vhezheni uye iyo ichabatanidzwa mune yakagadzikana vhezheni munguva pfupi iri kutevera.
Pakati penyaya huru uye chakatanhamara ndechekuti Vagadziri vewaini vatanga kushanda nerutsigiro rwekutanga rweVulkan 3D mifananidzo API chizvarwa chinotevera uye chinochinjika-chikuva.
Kunyangwe ndichitendera kuti nditaure izvozvo iyi API inogona kubuda kuva yepamusoro kunyatsoshandaa mune emazuva ano makadhi emifananidzo uye izvo zviri kuramba zvichigamuchirwa nevagadziri, zvatinga taura kuti kuvandudzwa kweizvi kwakasundirwa zvakanyanya sezvo iri danho rekutsiva OpenGL.
Kune rimwe divi, izvo vane natively vakagonesa multisample textures pamwe neyakaverengeka yakaverengwa D3D script iyo ichagadziriswa ne default.
Zvakare, Action Replay Code Manager, Foxit PDF Reader, VSphere 6.0, Janetter 4.1.1.0, Symantec Norton 360, Photo Renamer 3.x uye 4.x, Sentinel HASP, Minitab 16, SIGMA Photo Pro 6, Bankperfect 8.0.0.373, Iyo CodeXL 2.3, BaiduMusic, RT Se7en Lite uye Windows Media Player 6.4 kunyorera kwakagadziridzwa muWine 3.3.
Nezve mabug fixes, akati wandei mazita mazita akagoneswa ayo aive Max Payne 2, Mashiripiti Kuunganidza Pamhepo, Iyo Witcher 3, Iyo Chapupu, Chikonzero Chete 2 uye zvimwe zvakawanda.
Pasina zvimwe, kana iwe uchida kunakirwa neiyi nyowani yekuvandudza vhezheni uye nekuzivisa zvikanganiso kunharaunda, ndinokusiira iyo nzira.
Maitiro ekuisa waini mu3.3 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
YeArchLinux-based distributions, iwe unofanirwa kugonesa iyo Multilib repository. Saka zvinodikanwa kuti vagovagonesa mune yedu pacman.conf faira
Iwo wekuraira kuisa Wine 3.3 ndeiyi:
Maitiro ekuisa waini 3.0 paUbuntu uye zvigadzirwa?
Kutanga isu tichafanirwa kugonesa iyo 32-bit kuvaka (kana iwe uine 64-bit system), kana iwe uine 32-bit system, danho iri haridiwe; Kuti uite iyo, iri pamwe nemirairo inotevera:
Isu tinoenderera mberi nekuisa Waini, kutanga isu tichafanirwa kuwedzera iyo yepamutemo repository mune yedu system uye kugadzirisa izvo zvinyorwa.
Waita izvi, isu tinoenderera mberi nekuisa akakosha mapakeji ewaini inogona kumhanya zvakanaka.
Tinogona kuona kuti ndeipi vhezheni yewaini yatinayo ne:
Maitiro ekuisa waini 3.0 pane Fedora uye zvigadzirwa?
Muchiitiko cheFedora distro uye zvigadzirwa zvayo, zvinodikanwa kuti Isu tinofanirwa kuwedzera yakakodzera repository zvinoenderana neshanduro yatiri kushandisa yeFedora. Muchiitiko chekutorwa isu tinofanirwa kuongorora kuti ndeipi vhezheni yedu distro yakavakirwa.
Zve Fedora 24:
Zve Fedora 25:
Zve Fedora 26:
Uye pakupedzisira isu tinofanirwa kuisa Waini ne:
Pasina imwezve ado, iwe unotofanira kumirira kwechinguva kuti rutsigiro rweVulkan rubwinyiswe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Waini 3.3 kusimudzira kuburitswa kunotanga nerutsigiro rweVulkan